2014-10-18, 03:00 PM
The Founder Institute is the world's largest idea-stage accelerator. Join us for an informational event where you can meet local Directors, ask questions and learn how you can launchastartup in Yangon with help from top CEOs, experienced peers andastructured approach. What is it like to be in the Founder Institute? Who are some of the peers that you will be working with? Can the Institute help you build your dream company?
Founder Institute သည် ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး အိုင်ဒီယာ အဆင့် နည်းပညာလုပ်ငန်းများကို အရှိန်နှုန်းမြှင့် အထောက်အပံ့ ပေးသောအဖွဲ့အစည်းဖြစ်သည်။ ယခုတွေ့ဆုံပွဲတွင် ရန်ကုန်အခြေစိုက် Founder Institute ၏ ဒါရိုက်တာများနှင့်တွေ့ဆုံပြီး၊ ရန်ကုန်တွင် အခြေစိုက်ကာ နည်းပညာလုပ်ငန်းတစ်ခုကို ထိပ်တန်း CEO များ၏အကူအညီ၊ အတွေ့အကြုံရင့် ညီနောင်များ၏ အကူအညီများနှင့် စနစ်တကျ တည်ထောင်နည်းကို၊ စိတ်ကြိုက်မေးမြန်းနိုင်မည်။ Founder Institute တွင်ပါဝင်လျှင် ဘယ်လို အကျိုးရှိမလဲ။ ဘယ်သူတွေနဲ့ တွဲပြီးလုပ်ကိုင်ရမှာလဲ။ Founder Institute က သင့်စိတ်ကူး အိပ်မက် ပန်းတိုင်၊ နည်းပညာကုမ္ပဏီ တည်ထောင်ရာမှာ အထောက်အကူပြုမှာလား၊ သိရဖို့ မဖြစ်မနေ တက်ရောက် မေးမြန်းလိုက်ပါ။
Who Should Attend? ဘယ်သူတွေတက်သင့်လဲ
Anyone who has an idea forastartup or an early-stage companyStartup လုပ်ဖို့စိတ်ကူးရှိသူ၊ ကုမ္ပဏီသစ်တည်ထောင်လိုသူမည်သူမဆို Anyone that is interested in joininganew startup or looking foraco-founderStartup တွင်ပါဝင်လုပ်ကိုင်လိုသူ၊ Co-founder ဖြစ်လိုသူ မည်သူမဆို Anyone interested in learning about the Founder Institute programFounder Institute ၏ အစီအစဉ်ကို စိတ်ပါဝင်စားသူ မည်သူမဆို What is the Agenda? ဘာတွေပါမှာလဲ
Discussion, Drinks & Snacks
အခမဲ့ တက်ရောက်နိုင်ပါသည်။ This event is free to attend. Join us forafun evening! For more free startup events, visit http://fi.co/events.